Uluhlu lweNtengiso yePropathi yokuthengisa kunye yokuRhafisa eNew Zealand
I-1-10 yoluhlu lwe-3552
I-Starter enkulu- Icandelo loLungiso oluzinzileyo!
Icandelo lenkqubela-phambili ehlaziywe ngokupheleleyo!
umbono units ishicilelwe 1 day ago
Inkulu kakhulu kuthi ..... Igqibelele Wena!
Inkulu kakhulu kuthi ..... Igqibelele kwakho!
Brand New Trendy Apha
ICloverden Calling- Indawo yakho yokuqala egqibeleleyo
4 Igaraji yeemoto + Amagumbi ama-4 okulala
4 Garage yeemoto + igumbi lokulala eli-4
Mantla Ntshona-3 Igumbi lokulala eli-2
Emantla Ntshona- ibhedi ezi-3 ezihlala ekhaya
Khetha udidiindawo yokuhlala Amagumbi aqeshwayoAmakhaya okuhlala Izindlu Apartments Flats Iihotele zaseKapa units Studios Villas Izindlu zekhaya Iingwamza AmakhayaIqashiso lomhlaba Umhlaba wezoLimoIimpahla zentengiso Izithuba zeofisi Indawo yemizi-mveliso
INew Zealand (iMāori: iAotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) yisiqithi esizimeleyo kumhlaba woLwandlekazi iPasifiki. Ilizwe liquka indawo ezimbini eziphambili zomhlaba-i-North I (Te Ika-a-Māui), kunye ne-South Island (Te Waipounamu)-kunye neziqithi ezincinci ze600. INew Zealand ibekwe ezinye iikhilomitha ze2,000 (1,200 mi) empuma ye-Australia ngaphesheya koLwandle lweTasman kunye neekhilomitha ezili-1,000 (600 mi) emazantsi esiqithi sePacific siqithi seNew Caledonia, Fiji, kunye neTonga. Ngenxa yokude kwayo, yayilelinye lamazwe okugqibela ukuba ahlalwe ngabantu. Ngexesha elide lokuhlala bodwa, iNew Zealand yahluma yokwahlukahlukana kwezilwanyana, iifungi kunye nobomi bezityalo. Ubume obahlukeneyo beli lizwe kunye neentaba ezibukhali zeentaba, ezinjengeeAlps zasemaZantsi, zibalulekile ekuphakanyisweni komhlaba nasekuqhumeni kwentaba-mlilo. Idolophu enkulu yaseNew Zealand yiWellington, ngelixa elona dolophu inabantu abaninzi yiAuckland. Ngamaxesha athile phakathi kwe1250 ne1300, abantu basePolynesia bazinza kwiziqithi ezathi kamva kwathiwaywa igama yiNew Zealand kwaye bakhulisa inkcubeko eyahlukileyo yamaMāori. Kwi-1642, umhloli wamazwe waseDatshi u-Abel Tasman waba ngumntu wokuqala waseYurophu ukubona iNew Zealand. Kwi-1840, abameli be-United Kingdom kunye neenkosi zaseMāori batyikitya iSivumelwano se-Waitangi, esazisa ubukhosi base-Bhritane kwiziqithi. Kwi-1841, iNew Zealand yaba yikholoni ngaphakathi koBukhosi baseBritane kwaye kwi-1907 yaba ligunya; yafumana inkululeko epheleleyo emiselwe ngokusemthethweni kwi-1947 kwaye inkosi yaseBritane yahlala iyintloko yelizwe. Namhlanje, uninzi lwabemi baseNew Zealand be-4.9 yezigidi basuka eYurophu; I-Māori yemveli yeyona ndawo incinci, ilandelwa ngabemi baseAsia kunye nabemi basePacific Islands. Ukubonakalisa oku, inkcubeko yaseNew Zealand ithathwe ikakhulu eMāori nakwabahlali baseBritani bokuqala, ngokusasazeka okwandayo kwabafuduki. Iilwimi ezisemthethweni sisiNgesi, Māori, kunye neNZ uLwimi lokuThetha ngeZandla, kwaye isiNgesi sona sikhulu kakhulu. Ilizwe elihlumayo, iNew Zealand ikwindawo ethelekisa ngokuthe gabalala kwintsebenzo yesizwe, enje ngomgangatho wobomi, impilo, imfundo, ukukhuselwa kwenkululeko yoluntu nenkululeko yezoqoqosho. I-New Zealand yahamba notshintsho olukhulu lwezoqoqosho ngexesha le-1980s, eyayiguqula ukusuka kumkhuseli yaya kuqoqosho olukhululekileyo olukhululekileyo. Icandelo leenkonzo lilawula uqoqosho lwesizwe, lilandelwe licandelo lezemveliso, nezolimo; ukhenketho lwamazwe angaphandle ngumthombo obalulekileyo wengeniso. Kwelizwe jikelele, amagunya ezomthetho aphathiswe iPalamente ekhethiweyo, ingekho semthethweni, ngelixa amandla ezopolitiko elawulayo esetyenziswa yiKhabhinethi, ekhokelwa yinkulumbuso, ngoku uJacinda Ardern. UKumkanikazi uElizabeth II ngukumkani welizwe kwaye umelwe yirhuluneli-jikelele, okwangoku nguDame Patsy Reddy. Ukongeza, i-New Zealand ihlelwe kwi-11 yamabhunga engingqi kunye nabaphathi be-67 bengingqi ukulungiselela urhulumente wasekhaya. IRealm of New Zealand ikwabandakanya iTokelau (umda oxhomekeke kuwo); iZiqithi zeCook kunye neNiue (amazwe azilawulayo kunxibelelwano ngokukhululekileyo neNew Zealand); kunye neRoss Dependency, ebango leNew Zealand lendawo yaseAntarctica. INew Zealand lilungu leZizwe eziManyeneyo, iZizwe eziManyeneyo, i-ANZUS, uMbutho woBumbano lwezoQoqsho noPhuculo, i-ASEAN Plus Isithandathu, Intsebenziswano kuqoqosho lweAsia-Pacific, Uluntu lwePacific neForamu yePasifiki.